'१२ जना साथीलाई कोरोना भइसक्यो, सम्पर्कमा आएकालाई ड्युटीमा खटाइन्छ' :: विवेक राई :: Setopati
'१२ जना साथीलाई कोरोना भइसक्यो, सम्पर्कमा आएकालाई ड्युटीमा खटाइन्छ'
ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालका नर्सहरूले कोरोना उपचारमा खटिए पनि आफूहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा अस्पताल संवेदनशील नभएको गुनासो पोखेका छन्।
अहिलेसम्म १२ जना नर्समा कोरोना संक्रमण देखिसकेको भन्दै अस्पतालको लापरबाही यथावत् रहे अझै धेरैमा संक्रमण देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
'अस्पतालले हाम्रै पिसिआर गर्न मान्दैन। कति साथीहरूलाई संक्रमण देखिएको छ तर उहाँहरूको सम्पर्कमा को-को पुग्नुभो भन्ने कुरामा अस्पतालले कुनै चासो दिँदैन,' अस्पतालकी एक नर्सले भनिन्।
उनले आफैं पिसिआर गर्न जाँदा पनि अस्पतालले आनाकानी गर्ने गरेको सुनाइन्।
'आफैं पिसिआर गर्छु भनेर माथि जाँदा उल्टै लक्षण देखिएको छैन किन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुहुन्छ,' उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, 'यस्तो तालले कुन बेला संक्रमित भइने हो थाहा छैन।'
केही दिनअघि मात्र मेडिकल आइसियूमा खटिएका तीन जना नर्सलाई संक्रमण देखिएको थियो। तर अस्पतालले संक्रमितहरूको सम्पर्कमा पुग्नसक्ने अन्य नर्सहरूको भने ट्रेसिङ गरेर परीक्षण नगरिएको ती नर्स बताउँछिन्।
'ट्रेसिङमा एकदम लापरबाही छ। कोही संक्रमित भयो भने उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेका हुन सक्नेहरूलाई पनि आइसोलेट गरिँदैन। ड्युटीमै खटाइन्छ,' उनले भनिन्।
अस्पतालकै क्वार्टरमा बस्ने एक जना स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएपछि सँगै अर्को कोठामा बस्ने नर्सलाई अस्पतालले ड्युटीमै खटाएको छ।
उनलाई छुट्टै क्वारेन्टिनमा आइसोलेट गरेर राखिएको छैन। कोरोना उपचारमै खटिएकी अर्का नर्स भन्छिन्, 'यस्तो छ अस्पतालको हालत। संक्रमितलाई मात्र व्यवस्थापन गरिन्छ तर अरूमा सर्नसक्ने कुरालाई अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन।'
साथै, अस्पतालले कोभिड वार्डमा खटिएका नर्सहरूलाई परीक्षणबिना नन-कोभिड वार्डमा सिफ्ट गर्ने गरेको पनि पाइएको छ।
यसरी परीक्षण नगरी नन-कोभिड वार्डमा जाँदा यदि संक्रमण भए त्यसबाट धेरैमा संक्रमण सर्नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
कोभिड वार्डमा खटिएकी एक नर्सले भनिन्, 'संक्रमितहरू राखिएको ठाउँमा खटिएपछि हामीले पनि संक्रमण सर्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। पिपिई लगाउँदा लगाउँदै पनि कुनै बेला सानो कुराले गर्दा संक्रमण सर्न सक्छ। तर कोभिड वार्डमा खटिएकालाई नन-कोभिडमा लैजाँदा पनि परीक्षण गरिँदैन।'
अस्पतालले कोभिड उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड वार्डबाट नन-कोभिड वार्डमा लैजानुपूर्व कम्तिमा न्यूनतम अवधिका लागि भए पनि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने नर्सहरूको माग छ। तर अहिलेसम्म अस्पतालले त्यसरी राख्नलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नगरेको उनीहरू बताउँछन्।
साथै आफ्नो सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा अस्पतालले उल्टै आफूहरूलाई दोषी भन्दिने गरेको नर्सहरूको गुनासो छ।
'माथि कुरा गर्न गयो उल्टै तिमीहरूलाई कसले भन्यो मास्क खोल्न पर्‍यो? किन सँगै खाना खानु पर्‍यो भनेर उल्टै अनेक भन्नुहुन्छ,' अर्की एक नर्सले भनिन्, 'अब १२ घन्टा नै मास्क लगाएर बसिरहनु मिल्दैन। खाना खाँदा र घरिघरि खोल्नै पर्छ। अब त्यतिमै उल्टो हामीलाई नै दोषी देखाइन्छ।'
उनले अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थित तरिकाले परीक्षण नगरेको बताइन्।
कहिलेकाहीँ विभिन्न वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको 'र्‍यान्डम स्याम्पल' लिएर परीक्षण गर्ने गरेको जनाइन्।
'अस्ति त्यसरी नै परीक्षण गर्दा होस्टलमा बस्ने एक जनालाई पोजेटिभ देखियो। तर फेरि होस्टलमा रहेका अरूको परीक्षण गरिएन। सबैलाई नियमित ड्युटीमै बोलाइयो,' उनले भनिन्, 'अस्पतालले नै गर्दैन भने सरकारबाट कसरी आश गर्ने?'
अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने अस्पतालले नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै पनि लापरबाही नगरिएको जिकिर गरे।
उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिलेसम्म १२ जना नर्सहरू पोजेटिभ हुनुहुन्छ। हामीले लक्षणविहीनहरूलाई घरमै बस्ने सुविधा पनि दिएका छौं। त्यसबाहेकलाई राख्ने छुट्टै कोभिड वार्डको व्यवस्था गरिएको छ।'
उनले कोभिड वार्डमा खटिने नर्सहरूले पिपिई लगाएका हुँदा संक्रमण नभएको विश्वास हुने भएकाले ननकोभिड वार्डमा सिफ्ट गर्दा परीक्षण नगरिएको बताए।
उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि नियमित परीक्षण भइरहेको दाबी गरे।
'उहाँहरूको परीक्षण नगर्ने भन्ने हैन। उहाँहरूले अलिकति कुरा नबुझ्नुभएको हो। हामीले प्रोटोकल अनुसार परीक्षण गरिरहेको छौं। सबैको गर्न त साध्य छैन नि,' उनले भने।
निर्देशक शाक्यले अस्पतालमा ट्रेसिङ गर्नका लागि छुट्टै एउटा कमान्ड टिम पनि रहेको भन्दै सबै काम सोही टिमले गर्ने बताए।
उनले नर्सहरूमा संक्रमण अस्पतालबाट मात्र नभएर बाहिरबाट पनि फैलिएको हुनसक्ने जनाए।
'अहिले संक्रमण समुदायस्तरमा गइसक्यो। अब स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यहाँबाट गएपछि त बाहिर पनि जान पाउनुहुन्छ। त्यसैले अस्पतालबाटै संक्रमण फैलियो भन्नेचाहिँ लाग्दैन,' निर्देशक शाक्यले भने।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ११, २०७७, १०:०६:००